Frank Lampard Oo Loo Sheegay SHANTA Ciyaartoy Ee Ugu Muhiimsan Ee Ay Waajibka Ku Tahay In Uu Aaminaada Ugu Badan Siiyo Si Uu U Chelsea Ula Guulaysto. - Gool24.Net
Frank Lampard Oo Loo Sheegay SHANTA Ciyaartoy Ee Ugu Muhiimsan Ee Ay Waajibka Ku Tahay In Uu Aaminaada Ugu Badan Siiyo Si Uu U Chelsea Ula Guulaysto.
Frank Lampard ayaa si toos ah u bilawday tababarka kooxdiisa Chelsea oo uu ka tababare ahaan ugu soo laabtay wuxuuna bixiyay tababarkii ugu horeeyay ee ay Blues ugu diyaar garoobayso xili ciyaareedka cusub.
Frank Lampard ayaa loo sheegay shanta ciyaartoy ee ay waajibka ku tahay in uu aaminaada ugu badan siiyo si uu waqtigiisa Chelsea u guulaysto kadib markii uu si toos ah u badalay Maurzio Sarri oo Juventus u wareegay.
Khabiirka ESPN FC ee Shaka Hislop ayaa Frank Lampard u sharaxay shanta ciyaartoy ee ugu muhiimsan ee ay waajibka tahay in uu si gaar ah u aamino taas oo ka caawin karta in uu waqtisiisa Blues ee ka tababaranimo guulaysan karo.
Haddaba shabakada Gool24 ayaa halkan idiinku soo gudbinaysa talada uu khabiirka ESPN FC ee Shaka Hislop uu Lampard ka siiyay shanta ciyaartoy. Halkan ayaanad kaga bogan kartaa talada oo dhamaystiran.
Shaka Hislop ayaa Lampard talo ku siiyay in uu door hogaamiye siiyo difaaca dhexe ee Antonio Rudiger wuxuuna yidhi: “Waxaan filayaa in (Rudiger) uu ahaa kan ugu aab ciyaareedka joogtaysanaa difaacyada dhexe ee Chelsea. Waxaan dareensanahay in uu isku taagi karo door hogaamineed isla markaana uu afarta difaac ka dhigi karo kuwiisa”.
“Afarta danbe waxay u baahan yihiin hogaamiye, waxaan filayaa in Rudiger uu si fiican taas u leeyahay” ayuu Shaka Hislop hadalkiisa raaciyay.
Shaka Hislop oo xidiga labaad ka hadlaya ayaa yidhi: “Ruben Loftus-Cheek kaas oo qaybtii labaad ee xili ciyaareedkii la soo dhaafay naftiisa si joogto ah ugu dhex abuuray ka hoos shaqayntii Sarri, waxaan filayaa in Chelsea ay ka koox ahaan u jawaabtay.
“Waxaan rajaynayaa in uu booskiisa sii ilaashado, jiritaanka awoodiisa jidh ahaaneed, ma filayo in ay la iman karaan wax ka wayn, waxaan filayaa in uu leeyhay hibo cajiib ah, kaliya waxa uu u baahan yahay khibrad iyo daqiiqado uu ku ciyaaro” ayuu Shaka Hislop hadalkiisa ku daray.
Shaka Hislop oo xidiga afraad ee uu Lampard kula talinayo in uu aamino ka hadlaya ayaa yidhi: “Waa gool dhaliyaha kaliya ee ay haystaan. Giroud waxa uu waqti dheer soo ahaa mid gool dhalinta ka maqan, laakiin waxa uu bixiyay isku xidhan fiican oo ciyaarta ah, waxa uu bixiyay awooda jidh ahaaneed ee xerada ganaaxa.
Shaka Hislop oo Giroud ka sii hadlaya ayaa yidhi: “Haddii uu ku dari karo gool dhalin, taasi wax wayn ayay u noqon doontaa Chelsea.”
Riix 2 si aad xidigaha kale ee lagula taliyay Lampard u akhrisato.